Home » အသားပေး » လုပ်ခဲ့ပြီးနှင့်နီးပါးရှိပါတယ်!
အဆိုပါဆန်းသစ်တီထွင်မှုဓာတ်ခွဲခန်းများတည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။ ဒီဇိုင်နာများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့များပူးပေါင်းနေကြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ပမာဏအပျေါမှာကန်ထရိုက်လျက်ရှိသည်, နှင့်မီဒီယာ၏ဤစီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့ဖြည့်စွတ်ပုံစံကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတည်းက 3x အားဖြင့်စိုက်ပျိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို (2016) တိုးပွားခြင်းနှင့် Virtual အဖြစ်မှန်အတော်လေးပူပြင်းလက်မှတ်စေသည်။ ဤသည် 3-2003 အတွက်မုန်တိုင်းအားဖြင့်စားသုံးသူကိုယူသော 2010D ခေတ်ရေစီးကြောင်းနောက်တစ်ကျော့ပြန်လာပါသို့မဟုတ် retro-စန်းတစ်ဝမ်းကွဲ, ဒါမှမဟုတ် 1952-1954 (အက Black ဂွကနေသတ္တဝါမှတ်မိ) မှ "ရွှေခေတ်" ၏တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ မျိုးဆက်က X တူအဟောင်းတွေပရိသတ်များအတွက် သငျသညျကွညျ့ရှုနိုငျအောငျမြားနှငျ့ကလေး Boomers ထိုရက်သတ္တပတ်၏အသီးအသီးနေ့အဘို့စာရွက်ပေါ်တွင်ဘယျအခြိနျမှာကစားမည်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်အရာကိုကိုးကားသောတနင်္ဂနွေတီဗီလမ်းညွှန် (လက်ခံရရှိနောက်ကွယ်မှဖောင်းပွနှင့်သင့်ကအရမ်းကိုယ်ပိုင်အန်နာဂလဖ် 3D စက္ကူမျက်မှန်ကိုလက်ခံရရှိ၏ဖောင်းပွခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသတိရ 3pm မှာသင့်ရဲ့ CTR နည်းရုပ်မြင်သံကြား set ကိုဒီလာမယ့်တနင်္ဂနွေညဥ့်ပေါ်တွင်သင်၏ဧည့်ခန်းထဲမှာမေးရိုး 8D ။ အခုတော့သင်အိုင်ဗရီကို့စ်ဆပ်ပြာကြော်ငြာစဉ်အတွင်းသူတို့အားအနီနှင့်အပြာမှန်ဘီလူးစက္ကူမျက်မှန်ကိုချွတ်ယူကြပြီမလဲညာ?
အဘယ်သူမျှမ, တိုးပွားခြင်းနှင့် Virtual Reality "မဟာမီဒီယာသစ်တောထဲမှာကိုယ်ပိုင်သစ်ပင်။ " သူ့ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသတင်းအချက်အလက်နှင့်သူတို့ဖြစ်သို့မဟုတ်လက်ရှိလုပ်နေစေခြင်းငှါအစဉ်အဆက်အဘယ်မှာရှိစားသုံးသူကိုဗတ္တိဇံနိုင်စွမ်းဖြန့်ဖြူးဖို့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပျမ်းမျှအရွယ်ရောက်ပြီးသူနေ့စဉ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုနှင့် ပတ်သက်. 50 မိနစ်ကိုချောင်းမြောင်း approximates ပေမယ့်ငြင်းတကယ်တော့သူတို့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်မှာကြည့်ရှုသည်ထိုအချိန်ကာလ၏ထက်ဝက်ကြောင်းဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်ကနေဒီကိုငါသိ၏။ သူတို့ဘာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသနည်း က VR သို့မဟုတ် AR လား? သူတို့စက္ကူမျက်မှန်ကိုချွတ်ယူပါသလား?
"မိုဘိုင်းနည်းပညာဒါဟာရိုးရာမီဒီယာပိုင်ရှင်တွေသူတို့ယခင်ကဝင်ရောက်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူးင့်လူများနှင့်သောအရပ်တို့ကိုမရောက်ရှိဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးစွမ်းသည်နှင့်စားသုံးသူကိုရှာဖွေလုံးဝအသစ်သောနည်းလမ်းတွေပေးသည် ... ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူမီဒီယာများလောင်လမ်းကိုပြောင်းလဲနေသည်နှင့်ခြုံငုံမီဒီယာစားသုံးမှုကိုတိုးချဲ့နေပါတယ် နှင့်ဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းအရာပျော်မွေ့။ " ယောနသန်သည် Barnard, ကြိုတင်ခန့်မှန်း၏ဦးခေါင်း, Zenith အပေါ်ကိုးကားအဖြစ် ETBrandEquity.com
AR နှင့် VR ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပိုပြီးခေတ်မီအလယ်ပိုင်းနှင့််စစ်ဆင်ရေးများအတွက်အသွင်ပြောင်းဖို့သတင်းနှင့်အခြားမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများရှေ့ဆောင်သည်။ ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ, ဝင်ငွေအကျိုးအမြတ်, ဤ၏ကြည့်ရှုမှုများကြီးထွားဟူသောဝေါဟာရကိုစတင်တည်ထောင်သောအထက်သို့ရေပန်းစားပုံစံဖြစ်ပါတယ် "မိတ်ဖက်။ " တချို့ဥပမာ The Guardian ကညဦးတိုင်းသတင်းအစီရင်ခံစာများအဘို့အပေးဒုသတင်းများအတူတက် teaming, ဒါမှမဟုတ်နှင့်အတူအခြေအနေ Nast မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ် Vox နှင့် အား NBC ကနေအသစ်ကကြော်ငြာထုတ်ကုန်, ဒါမှမဟုတ် The New Yorker လှည်ပုံပြင်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အမေဇုံချုပ်အပေါ်ပြသခံရဖို့တိုတောင်းသောရုပ်ရှင်သို့စာပေ archive ကိုပါပဲ။ စားသုံးသူမီဒီယာအကြောင်းအရာသုံးခု "ငါ" s ကိုပေးစေခြင်းငှါအသစ်ကမျိုးစပ်နည်းလမ်းတွေများ၏လိုက်လျောညီထွေ: (မီဒီယာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ 2017 ၏ OOYALA ပြည်နယ်မှ) ရုတ်တရက်, တစ်ဦးချင်းစီနှင့် Interactive ။ *
မီဒီယာကုမ္ပဏီများကနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေသူတို့ကိုယ်သူတို့ခေါ်ခြင်းအဘို့အ "ဒီဖက်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်နည်းပညာစေရန်မဟုတ်ပါဘူး ... ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်နည်းပညာများကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လောက်ထွက်တွက်ဆဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ "- Jake Silverstein, အယ်ဒီတာ, The New York Times မဂ္ဂဇင်း, က Wired အတွက်ကိုးကားအဖြစ်။
AR သို့မဟုတ် VR ဒြပ်စင်အဘို့ထုတ်လုပ်နောက်ကွယ်မှအဆိုပါဗီဒီယို / ရုပ်ရှင်ရုံထုတ်လုပ်မှုအခြေခံမူရုပ်ရှင်ကျောင်းမှာသင်တို့လက်ထက်ကာလကတည်းကအတူတူပင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်နေ့တာအတွင်းသို့မဟုတ်အနီးရှိပြတင်းပေါက်အတွင်းမှအပြင်ဘက်ရိုက်ကူးသည့်အခါဖွင့်လှစ်ဖို့အဘယ်မှာရှိကင်မရာကိုထောင့်, အလင်းနှင့်အတူပန်းချီ, အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ဤသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ထုတ်လုပ်မှုလယ်ပြင်၌အောင်မြင်သောဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်ဝေးနဲ့အရေးအပါဆုံးကျော်လွန်သောတဦးတည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်: အအပိုင်းအစသငျ့ပရိသတျပါဝငျဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ, အယူအဆမူရင်းဖြစ်တယ်, တစ်ဦးအမြင်အာရုံပုံပြင်ကိုပြောပြရန်သင့်စွမ်းရည်အပေါ်ဖြစ်ပါသည် တံဆိပ်လက်မှတ်ကို!
တိုးပွားခြင်းနှင့် Virtual Reality မျှနယ်နိမိတ်ရှိပြီး, ဆက်ဆက်မီဒီယာ Agnostic စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအပိုငျးပိုငျးက်ဘ်ဆိုက်များ, VOD နှင့် app များကိုတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်! ဒါဟာရုပ်ရှင်တိုတစ်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လူမှုမီဒီယာသတင်းကလစ်, ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးအဘို့ကြော်ငြာများအတွက်ဖြစ်မရှိပါ။ ဒါဟာဖန်တီးမှုကြောင့်ဖြစ်လိုလားသမျှနိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာစားသုံးသူပိုမိုနီးကပ်စွာဆောင်ခဲ့သည်။ လုပ်ခဲ့ပြီးနှင့် Virtual Reality လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်းစံဖြစ်လိမ့်မည်, ဒီတော့သူစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အမြင်အာရုံပုံပြင်ကိုပြောပြရန်နောက်ဆုံးပေါ်လမ်းအတွက် "ဟုအဆိုပါ pack ကိုဦးဆောင်လမ်းပြ" ကိုလိုလား?
တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် virtual reality	2017-08-01
ယခင်: Sonnet Thunderbolt 3-to-PCIe Card ကိုတိုးချဲ့ထားသောစနစ်များများအတွက် Card များကို Upgrade Thunderbolt2၏ရရှိနိုင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
နောက်တစ်ခု: LED ကို Fresnel အအေးခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းလွှာ?
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "နီးပါးရှိပါတယ်လုပ်ခဲ့ပြီးနှင့်!" ။ http://www.broadcastbeat.com/augmented-and-virtually-there/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။